News - Ndị na-ere sayensị na-atụle uru nke FBA nyocha isiokwu
Science na-ere na-atụle uru nke FBA isiokwu nnyocha
Las Vegas, June 9, 2021 (Global News Agency) - Onye na-ere sayensị na Las Vegas, Nevada na-adịbeghị anya tụlere isiokwu na uru nke nyocha isiokwu maka mmezu nke ndị na-ere ahịa Amazon. Companylọ ọrụ ahụ mara ọkwa na nso nso a Amazon FBA keyword tool, nke e mere maka ndị na-ere na Amazon.
Onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ, Robert MacDonald, kwuru, sị: “Nnyocha isiokwu dị mkpa na ụlọ ọrụ ọ bụla, ma ọ na-ere ngwaahịa ma ọ bụ na ọ nwere naanị websaịtị na-enye ihe ọmụma. Iji mee ka ndị mmadụ gaa na webụsaịtị ahụ, a na-eji isiokwu dị iche iche eme ihe, iji mata mkpụrụ okwu kwesịrị ekwesị, nyocha dị mkpa. ”
MacDonald kwuru na ngwa ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-achọ Amazon ozugbo ma wepụta mkpụrụ okwu kachasị ọhụrụ na nke kachasị mkpa. O kwuru na ngwa ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-enye ozi isiokwu kachasị ziri ezi ma bụrụ n'efu maka ndị na-ere FBA. O kwukwara na nyocha isiokwu, ọkachasị na ụlọ ọrụ asọmpi dị egwu dị ka ire na Amazon, dị oke mkpa maka ndị na-ere ahịa ịnọ n'ihu asọmpi ahụ.
MacDonald kwuru, sị: “Obere mmụba na ọnụego mgbanwe mmadụ nwere ike ịpụta nnukwu ọdịiche dị n'etiti ịdepụtara dị ka ọnụọgụ mbụ na Google maka isiokwu ahụ ma ọ bụ ịbụ onye na-agbagha agbagha." “Ihe ọ bụla dị na ụlọ ọrụ a. Onye obula aghaghi ima na ha aghaghi iguzo na peeji mbu. N'ezie, ha na-aka ọkwa kachasị mma n'ibe akwụkwọ mbụ, nke a bụ etu mkpụrụ okwu si eme nke a. ”
MacDonald kwuru na ụlọ ọrụ ọ bụla na-ahụghị na ibe mbụ ma ọ bụ abụọ nke injin ọchụchọ ahụ nwere ike ọ gaghị achọta ọtụtụ nyocha. Nnyocha egosiwo na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-agagharị na peeji abụọ mbụ na atọ nke Google mgbe ị na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ọ dị mkpa ịkwado elu na isiokwu akọwapụtara. MacDonald kwukwara na akụrụngwa isiokwu Amazon bụ n'efu nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka iru nọmba ndị a na-achọsi ike.
Ọ gbakwụnyere, "Onye ọ bụla nke tinyere ụdị ọ bụla nke ịre ahịa n'ịntanetị ga-amara na iru peeji ole na ole dị oké mkpa." “Anyị mepụtara ngwá ọrụ a maka ndị na-ere Amazon iji nyere ha aka ịkwado ngwaahịa ndị ha na-ere. Isiokwu ndị ziri ezi ga-arụ ọrụ dị mkpa n'inweta ọkwa ndị ahụ na-achọsi ike ma nyere ndị na-ere ahịa a aka iru ndị na-ege ha ntị. mmetụta. ”
MacDonald kwuru na onye ọ bụla nwere ajụjụ ma ọ bụ chọọ ịmatakwu ihe nwere ike ịga na ụlọ ọrụ ahụ n'ịntanetị iji mụta banyere ngwụcha nke ngwa ọrụ na otu o si arụ ọrụ. Ọ gbakwụnyere na ngwá ọrụ ahụ na-enye ndị na-ere ahịa obere mgbanwe, mana mgbanwe ndị a nwere ike ịmepụta nnukwu nsonaazụ na Amazon.
O kwuru na a na-emepụta ngwá ọrụ ahụ iji gosipụta naanị mkpụrụokwu Amazon, ya mere ọ na-arụ ọrụ zuru oke na ndị na-ere ahịa Amazon. Dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ, ndị na-ere Sayensị anaghị egosipụta nnukwu ndepụta nke okwu niile nwere ike ịdị mkpa dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ, mana naanị na-egosipụta mkpụrụokwu akọwapụtara maka ndị ahịa Amazon, yabụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịhọrọ ihe ha chọrọ iji Keywords mee ihe.
MacDonald kwuru na n'ụzọ bụ isi, ngwá ọrụ ahụ na-enye ndị na-ere ahịa ụzọ iji bulie azụmaahịa ha site na ịba ụba ahịa, n'ihi na ọ bụghị mmadụ niile ga-ahazi maka isiokwu niile dị mkpa. Maka nke a, MacDonald kwuru na ndị na-ere ahịa ga-enwerịrị ngwa ọrụ ahaziri iche iji rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ ha akọwapụtara, ha na-ejikwa ngwá ọrụ iji họrọ isiokwu ndị ga-enyere ha aka ịzụlite azụmaahịa ha.
Ndị nwere mmasị nwere ike ịgụ ọkwa ọkwa nke ụlọ ọrụ ahụ na saịtị mgbasa ozi Pịa Advantage ma ọ bụ gaa na weebụsaịtị ha iji mụtakwuo banyere ngwa nyocha isiokwu ya nke emere maka ndị na-ere ahịa Amazon. Enwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ site na ọrụ Facebook ha ma ọ bụ site na ekwentị ma ọ bụ email. Ndị nwere mmasị nwere ike ịchọta ozi kọntaktị na ozi niile ha na mgbasa ozi mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ ha.
Maka ama ndị ọzọ gbasara Onye Ahịa Sayensị, biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ ebe a: Scientific SellerRobert MacDonaldsupport@scientificseller.com PO Box 29502 # 84699L Vegas, NV 89126
Instagram "abughizi ihe eji ekesa foto", onye na ahu maka Adam Mosseri kwetara na Facebook Inc (NASDAQ: FB) emekorita aka na TikTok na Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) na obere vidiyo. (Nasdaq: GOOGL) Na obere vidiyo na YouTube, Oge Ego kwetara ịkọ. Ihe mere: Mosseri kwenyere na ịdịwanye mkpa nke vidiyo na ị na-anya ntanetị n'ịntanetị ma chọọ ị attentiona ntị na mgbasa ozi. Ndị na-eme nnyocha gosipụtara nchegbu banyere ngbanwe na ngwa nzụlite ego Facebook kachasị mkpa, nke nwere ike itinye Instagram n'ihe egwu
The comedies hit "Echere m na ị ga-ahapụ" na "Ọ dịghị mgbe m" laghachi ma kwadebe maka Kevin Smith "Master of Universe" na aru "Sexy Beast"
Companylọ ọrụ ahụ kwuru na Tọzdee na Facebook Inc amalitela ịdọ ụfọdụ ndị ọrụ aka na ntị na ha nwere ike ịhụla "ọdịnaya extremist" na saịtị mgbasa ozi. Nseta ihuenyo nkekọrịta na Twitter gosipụtara ọkwa na-arịọ "asking na-echegbu onwe gị na onye ị maara na-aghọ onye na-emebiga ihe ókè?" Onye ọzọ na-adọ ndị ọrụ aka na ntị na "Ọ nwere ike ịbụ na ekpughere gị ọdịnaya ndị na-emerụ emerụ n'oge na-adịbeghị anya." Ntanetị mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị na ụwa Ọ dịla anya nrụgide sitere n'aka ndị omebe iwu na ndị otu na-ahụ maka ikike obodo iji lụso extremism ọgụ na nyiwe ya, gụnyere isonye na mkpọsa ụlọ US na ọgba aghara Capitol na Jenụwarị 6, mgbe ndị otu na-akwado onye isi ala Donald Trump gbalịrị ịkwụsị. ndị omeiwu US gosipụtara na Joe Biden meriri na nhoputa ndi ochichi na Nọvemba.
Dị ka akụkọ ọhụrụ si GamesBeat, "Star Wars: Squadron" Onye Mmepụta EA Motive na-amalitegharị usoro akụkọ sayensị na-ewu ewu lanarị egwu usoro "Ọnwụ Nwụrụ Anwụ".
Studiolọ ihe nkiri egwuregwu nke Los Angeles Singularity 6 ebulitekwuola ego ka ọ na-agbasa ma na-akwadebe ịmalite egwuregwu mbụ ya. Mmalite ahụ gwara TechCrunch na ha welitere $ 30 nde na usoro B nke FunPlus Ventures na-eduzi, yana nsonye n'aka Andreessen Horowitz (a16z), LVP, Transcend, Anthos Capital, na Mitch Lasky. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ egosipụtala ihe dịka $ 49 nde na ego, nke bụ nnukwu ego, mana ọ na-egosi ọtụtụ ndị na-etinye ego na-atụ anya ịgbakọ n'egwuregwu egwuregwu egwuregwu mgbe Roblox's anụ ọhịa IPO gasịrị.
Ihe oyiyi ichikota onyogho na-egbochi igbochi ojiji nke asusu ma obu onyonyo nke na akwado ma obu wedata udiri aru di iche iche.
Igwe kpakpando kachasị dị elu chọrọ inweta aha "Friday" site na Warner Bros ma bo ebubo ụlọ ọrụ ahụ maka igbu oge na ọgwụgwọ na-adịghị mma. Warner kwuru na nsogbu dị na ice.
Usoro nlekọta azụmahịa kachasị elu, usoro mmụta 7 pụrụ iche na-ekpuchi njikwa, ahịa dijitalụ na akụrụngwa mmadụ, wdg. Ngwa ngwa ngwa na nke ọma mechara na ọnwa 8, na-enye gị ohere inweta ejiji ndị Britain.
Warner Bros. Studio dị na Leavesden, UK (WBSL) gbasaa akụrụngwa ya site na iwebata ụda ọhụụ atọ ọhụụ na usoro mmepụta ọhụụ, V Stage. HBO “Egwuregwu nke ocheeze” prequel “Dragọn Houselọ” ama enen dị ka ndị mbụ mmepụta iji ọhụrụ owuwu. ewepu na[...]
Onye nduzi ahụ kọwara ọnọdụ esemokwu nke gosipụtara ihe ngosi akara ngosi nke ihe nkiri si na 2019 Best Picture nominated film "N'otu oge na oge na Hollywood".
Mgbe ọnwa ole na ole nke mmachibido iwu, mgbasa ozi mgbasa ozi, na nchịkọta nke ihe nkiri nkiri ịhụ mba n'anya, TV na ọdịnaya egwu, ndị Kọmunist nke China mechara mee emume ncheta afọ 100 na Tọzdee. Ọ atụmatụ okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, uka ememe nlezianya mere ndokwa na Tiananmen Square, na chauvinism […]
HKMA na-ahazi usoro ọmụmụ 8 MBA na mahadum 5 a ma ama ma na-arụ ọrụ n'otu oge na Hong Kong, na-enye ọpụrụiche dị iche iche, gụnyere njikwa azụmaahịa, ịre ahịa, njikwa ego na akụnụba mmadụ. Afọ 1.5 iji wuchaa, debanye aha ozugbo maka nkuzi nkuzi n'efu.
Ihe nkiri ọhụrụ Chris Pratt na-elekwasị anya na agha ndị ga-abịa n'ọdịnihu na ndị iro ala ọzọ, mana ihe na-adọta ya bụ ihe mmadụ. Na "Agha nke Echi," Pratt na-akpọbu onye agha mbụ Dan Forester, onye na-aga 2051 iji chebe ọdịnihu nwa ya nwanyị ma sonyere agha meriri n'etiti ụmụ mmadụ na ndị mwakpo ọbara na-agba ọbara. “Ọ bụrụ na ị nwere ike itinye ihe nkiri nke 'Nke a bụ ndụ mara mma' site…
Eze gụgharia vidiyo ezerela ya n'oge gara aga, mana ụlọ ọrụ na-emepe ngwa ngwa.
Enweghị mmebi, nkwa zuru ezu! Inye dịghị ụbọchị mbụ nkwa! Iwu mkpuchi ahụ na-amalite site na nchekwa 1 [Global Super Power].
Nke a na-egosi na ụkọ mgbawa ga-emetụta ụlọ ọrụ ahụ nke ọma mgbe nkeji nke abụọ gasịrị. Fọdụ ndị isi ụlọ ọrụ ụgbọ ala ekwuola na oge a ga-aka akara oge kachasị njọ nke nsogbu ọkọnọ.
Nrọ bụ oghere ebe ị nwere ike igwu egwu ma nweta nrọ nke Media Molecule na obodo ya. Nke a bụkwa ohere iji mepụta nrọ gị, ma ọ bụ egwuregwu, nka, ihe nkiri, egwu ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'etiti.
Emelitere ikikere na oge. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na ụlọ ọrụ ntanetị abụọ ọhụrụ EW Scripps malitere taa, TrueReal na Defy TV, ehichapụla na 92% nke ezinụlọ ndị America. Na mgbakwunye na mkpuchi netwọk, Scripps kwupụtakwara nkọwa mmemme. Defy TV ga-elekwasị anya na ụmụ nwoke dị afọ 25 ruo 54 wee nye […]